Debian 10.8 inouya neyakagadziridzwa NVIDIA mutyairi uye zvimwe zvinogadziriswa | Linux Vakapindwa muropa
Mwedzi miviri mushure meiyo yapfuura kugadzirisa, chirongwa chiri seri kwekukosha kwakanyanya kweLinux chakatangwa Debian 10.8. Iyi inguva yechisere yaBuster yekuvandudza, iyo codename ino shanduro inoshandisa kubvira zvayaive kuvhura kekutanga muna Chikunguru 2019. Sezvacherechedzwa pakutanga kwetsamba, kuburitswa kwetsvina hakuiti vhezheni itsva yeDebian 10.
Debian dot inogadziridza, senge iwo eUbuntu LTS vhezheni, ari chaiwo matsva mifananidzo ayo inosanganisira gadziriso uye diki gadziriso yakaunzwa kubva panguva yakaburitswa chifananidzo chekare, icho mune iyi kesi chaive 10.7 uye chakapihwa kwatiri kutanga kwaZvita. Shanduko uye gadziriso dzinogadziridza dzinosanganisira ekuvandudzwa ekuchengetedza kune ese marudzi emapakeji, yazvino vhezheni yeSteam, yakagadziridzwa NVIDIA driver package, uye yenguva yenguva dhata yakagadziridzwa, pakati pezvimwe zvinhu. Rondedzero izere yeshanduko inowanikwa pa Iyi link.
Debian 10.8 inogadzirira nzira yeBullseye
Debian 10.8 ine zvakare kunatsiridza kuunganidzwa zvinyorwa iyo inobvumira kuburitsa mifananidzo kuti inyorwe zvakanyanya muparutivi uye nokudaro kuburitswa kutsva kunogona kugadzirwa nekukurumidza zvakanyanya kupfuura kwakaburitswa yapfuura. Izvi zvakasimbiswa kuti zvakashanda nekukurumidza nguva ino.
Iyo inotevera vhezheni inofanira kunge iri Debian 10.9 uye inofanirwa kusvika muna Kubvumbi. Debian 11 iri kuuya gare gare, codenamed Bullseye, ane budiriro yakatopinda mukosuru yakakosha, nhanho ichateverwa nechando chakasimba kwazvo (chando chakaomarara) pakati paKurume. Iyo yekushandisa sisitimu ichave neyakagadzikana vhezheni munguva yezhizha, asi Debian haazotiudze iro chairo zuva rekuburitsa kudzamara vaona kuti zvese zviri chokwadi uye iyo system yakagadzirira kushanda pasina matambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Debian 10.8 inouya neyakagadziridzwa NVIDIA mutyairi uye zvimwe zvakawanda zvinogadziriswa